Solombavambahoakan’i Rosia Mitambatra Lasibatry Ny Fanebahana Ety Anaty Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Novambra 2012 0:51 GMT
Vao haingana ny RuNet Echo no nitatitra momba ny Lurkmore [GV], tranonkàla Rosiana mpanebaka miendrika Wikipedia izay nampidirin'ireo Rosiana mpanome tolotra aterieto ho ao anaty lisitra maintiny tamin'ny fomba hainga sy tsy nasiana resa-be noho ireo lalàna vaovao mifehy ny sivana. Nampitombo ny lazan'ilay tranonkala ny fandalovany teny anaty vaovao teny, ka nahatonga ilay mpitoraka bilaogy an-tsary sady mpikambana ao amin'ny Kaomity mpandrindran'ny mpanohitra, ny Coordinating Council Rustem Adagamov, hibitsika hoe [ru]:
Результат запрета: сегодня весь Рунет сидит на Луркморье. 🙂
Ny vokatr'ilay fibahanana: tao amin'ny Lurkmore daholo ny Runet rehetra. 🙂
Saingy indrisy, sahala amin'ny latsaka anaty rano mangotraka ilay laza vao azon'ny Lurkmore. Hatreto aloha raha toy ny tsy mahalàla ny fisian'ilay tranonkala, Rosiana marobe mpikambana ao amin'ny parlemanta no efa nahamarika ny fidiran'ny Lurkmore ao anatin'ny resa-dalàna mifehy ny antoko Rosia Mitambatra[ru].
Toy ireo fampidirana maro ao amin'ny Lurkmore, ny iray momba ny Rosia Mitabatra no tena masiatsiaka miresaka ny olam-pisiany, ny bontolony, ny tsy mazavazava, tsy dia azo antoka loatra amin'ny resaka asa, ary rakotry ny fanadihadiana mahatsikaiky. Ity, ohatra, ny fomba niantombohany :
“Rosia Mitambatra” (vEdRo [avy amin'i Rosia Mitambatra->Edinaya Rossiya->EdRo(Fony)->vEdRo(Siny) -A.T.], navaln. Party of Crooks and Thieves / Antokon'ny Mpisoloky sy Mpangalatra (PCT), nest. Antokon'ny mpangalatra, mpamono olona, ary mpanolana zazakely, Mihinana an'i Rosia [avy amini Edinaya Rossiia->Edim Rossiiu -A.T.], ny antokon'ny Hoavin'ny Taranatsika) — antoko politika Rosiana iray misy ireo mitàna birao. Mifidy tena fotsiny amin'izao amin'ny alàlan'ity fomba manaraka ity : “Carousel”, “Hala-bato”, “Mpifidy efa maty” ary “mangalatra poketra sy mitsoaka”.
Ity famaritana mampisavoritaka nefa manan-karena ity dia manondro fanakianana iray mikasika antoko mifamatotra amin'ny fitantanan-draharaha Rosiana, dia manasongadina fifidianana parlemantera maro efa tsapan'ny maro fa nisy hala-bato nanomezana tombony ny antoko, ary manome lisitra antoko izay anarana fotsiny (vokatry ny fahaleovan'ny vahoaka). Ny fampidiran-dahatsoratra dia tonga hatrany amin'ny firesahana ny fananganana ny antoko ho toy ny mpandimby ara-panahy ny Antoko Kaominista. Ireo mpandray anjara ao amin'ny Lurkmore dia mandanjalanja ilay fanambaran'ny antoko (izay mety ho sandoka), ny toerana tànan'i fahaiza-mitarik'i Putin, ary ny hery manentana ireo maro mpanohana ny antoko. Ireo fampidirana lahatsoratra dia ahitàna ihany koa ohatra amin'ireo fampielezan-kevitra politikan'ny Rosia Mitambatra hatraminà fantina sarisary mampihomehy [ru], izay ahitàna andianà fangon'antoko nasiana fanovàna.
Ohatra amin'ireo fangon'ny Rosia Mitambatra nasiana fanovàna mahatsikaiky. Ilay orsa nosoloina rajako, ary nyteny dia mivaky hoe “Guinea Mitambatra.” 24 Novambra 2012.
Somary efa azo nalaina an-tsaina mialoha, ny fanebahana tahaka izao dia nampitsingilahila mpikambana maro ao amin'ny Rosia Mitambatra, izay, araka ilay gazety mpisary adala ety anaty aterineto Lifenews.ru [ru], nandrahona ny hitondra ilay tranonkala eny anatrehan'ny fitsarana mba hiarovan'izy ireo ny “haja amam-boninahiny.” Lifenews nitanisa ny Solombavambahoakan'ny Rosia Mitambatra, Yevgeny Fedorov.
Ny lahatsoratry ny Lurkmore, tahaka ireo lahatsoratra hafa feno lainga momba ny antokonay aty anaty aterineto, dia ady an-tserasera afafin'i Etazonia tsotra izao. […] Momba ilay lahatsoratra manokana, dia tomponandraikitra tanteraka eo ambanin'ny fehezan-dalàna vaovao momba ny fanalàm-baraka izy.
Fedorov dia notohanan'ilay solombavambahoaka Frants Klintsevich, izay mamikitra amin'ny rambon'akanjony :
Afaka mahita ity tenim-boto ity ireo ankizy!
Efa nisy tany aloha fanesorana lahatsoratry ny Lurkmore vokatry ny raharaham-pitsaràna. Tamin'ny 2010, Yekaterina Gordon mpihira/bilaogera/mpanao gazety dia nahomby tamin'ny fanesorana [ru] lahatsoratra iray nikasika azy taorian'ny fifanarahana fanelanelanana niarahana tamin'ireo mpitantana ny Lurkmore. Ireo antony narosony, anefa, tsy resaka fanalàm-baraka — Ny fahitàna azy dia ahiahy [ru] noho ireo mombamomba azy manokana niparitaka tao amin'ilay pejy.
Mazava loatra, raha raisina ny loharanony, dia tahaka ny zavatra noforonina ihany ity tantara ratsy vaovao ity. Ohatra, iray amin'ireo solombavambahaka no nitanisa an'i Sergey Zhelezniak tao amin'ny Lifenews.ru, taty aoriana kely nolazain'ny masoivohom-baovao Interfax [ru] fa na tena nanatona azy tokoa aza ny mpanangom-baovaon'ny Lifenews nangataka fanehoan-kevitra momba ilay lahatsoratra, tsy manana fotoana izy hamakiana “tantara foronina.” mpampiasa Twitter, cìdia nanamafy [ru] ilay tantara :
Zhelezniak niteny tamiko hoe nisy olona niantso azy avy any amin'ny @lifenews_ru ary niteny, io misy lahatsoratra masiatsiaka ao amin'ny Lurkmore, mety hamaky azy ve ianao ka hitaritarika azy eny anoloan'ny fitsarana?
Fa amin'izany rehetra izany, nahazo tosika iray hafa hampahalaza azy fotsiny aloha ny Lurkmore. Ny fampidirana lahatsoratra Rosia Mitambatra, etsy ankilany, dia hasiam-panavaozam-baovao hampidirana ireo fivoaran-draharaha amin'ny fomba faran'izay mahatsikaiky takatry ny saina.